Hordhac: Arsenal Vs Newcastle - Rikoodhka Aan La Arag Ee Arsenal Ka Haysato Newcastle Iyo Shaxaha Macquulka Ah - Laacib
HomeWararka CiyaarahaHordhac: Arsenal vs Newcastle – Rikoodhka Aan La Arag Ee Arsenal Ka Haysato Newcastle Iyo Shaxaha Macquulka Ah
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u dagaallami doonta inay kusoo laabato jidka guusha kaddib guul-darradii xanuunka badnayd ee ay Liverpool kusoo karbaashtay Anfield Sabtidii usbuucii hore, waxaanay maanta cadhada kula dhacayaan Newcastle United oo ah kooxda ugu hoosaysa horyaalka Premier League.
10 ciyaarood oo xidhiidh ah oo aan dhinaceeda dhulka la dhigin, waxa Arsenal kasoo afjartay Liverpool oo 4-0 nkusoo garaacday, halka Newcastle United ay barbarro 3-3 ah la gashay Brentford taas oo keentay inay hoos ugu dhacaan kaalinta 20aad ee horyaalka Premier League.
Inkasta oo ay khasaare weyn la kulmeen, haddana Arsenal ma aanay lumin booskeeda kaalinta shanaad ee horyaalka, waxaase kaabiga soo saaray oo min hal dhibic ka dambeeya laba kooxood oo haddii ay mar kale kufto dhaafi doona.
Sadio Mane, Diogo Jota, Mohamed Salah iyo Takumi Minamino ayaa soo afjaray waqti farxadeed oo goolhaye Aaron Ramsdale uu kula jiray Arsenal, isaga oo ugu faanayey Bernd Leno inuu guulaha kooxda sabab u yahay.
Liverpool waxay guuleysatay 16 ka mid ah 17kii ciyaarood ee ugu dambeeyey horyaalka ee ay kulmeen Newcastle United, guul-darrada kali ahina waxay ku timid April 2018 oo lagaga badiyey 2-1.
Tan iyo guushii 1-0 ahayd ee November 2010, Newcastle ayaa guul-darraysatay sagaal cciyaarood oo ay Arsenal ugu tagtay Emirates Stadium, waxaana kaga sii daran in shantii ugu dambeeyey ay xataa ku fashilmeen inay goolal dhaliyaan.
Arsenal waxay dhalisay ugu yaraan hal gool, 17kii ciyaarood ee horyaalka ee ugu dambeeyey ee ay kulmeen Newcastle, 16kii ugu dambeeyeyna Arsenal ayaa goolal ku furtay ciyaarta, waana rikoodhkii ugu dheeraa ee koox ay goolal si xidhiidh ah uga dhaliso.
Arsenal waligeed guul-darro kalama aanay kulmin koox kaalinta ugu hoosaysa kaga jirta horyaalka Premier League. 21 ciyaarood oo ay kooxda sagxadda fadhida kulmeen, waxay guulo heshay 15 jeer, lixna barbarro ayay galeen, iyagoo dhaliyey 23 gool, shabaqoodana ay taabteen laba kali ah.
Ciyaarta: Arsenal vs Newcastle United
Arsenal ma jiro wax dhaawac cusub ah oo walaac gelin kaaya, waxaana kaliya ka maqan Granit Xhaka oo sannadka cusub soo laabanaya, halka Saed Kolasinac uu isaguna wali kasoo kabanayo dhaawac kuraanta ah.
Kieran Tierney ayaa baro-bixin doona Nuno Tavares, halka Albert Sambi Lokonga uu sii wadan doono inuu khadka dhexe ka ciyaaro, waxaase uu cadaadis kala kulmi doonaa Ainsley Maitland-Niles oo doonaya inuu helo boos uu kusoo bilowdo.